Kastamka Spain | Wararka Safarka
Maria | | dhaqanka, Espana
Lixdameeyadii, dawladda Isbaanishku waxay hindisay olole dalxiis oo ay ku soo jiidato dadka soo booqda Spain kuwaas oo ka faa'iideysanaya hadal-haynta shisheeyaha ee uureysa waddanka inuu yahay meel cidlo ah oo leh caadooyin qurux badan: Isbaanishku waa ka duwan yahay!
Runtu waxay tahay in kasta oo aan dhaqanno badan iskaga mid nahay deriskeenna woqooyi, haddana innaguna Waxaan leenahay caadooyin si gaar ah u gaar ah oo dhaqankeena ka dhigaya mid la yaab leh shisheeyaha. Maxay yihiin kuwa ugu xiisaha badan?
1 Saacadaha dambe
2 Baararka iyo qasabada
6 Isbaanishka Sannadaha Cusub Eve
Isbaanishku goor hore ayey kacaan laakiin waxay aad u seexdaan waqti dambe marka loo eego dadka kale ee reer Yurub. Wadooyinkeena sida caadiga ah waxaa ka buuxa dad ilaa habeen dambe maxaa yeelay saacadaha dukaamada iyo baararka ayaa aad u dheer. Bartamaha magaalooyinka waaweyn waxaad marwalba kaheleysaa dadweyne farabadan waqti kasta oo maalinta kamid ah.
Sidoo kale, waqtiyada cuntada waa dambe. In kasta oo xaqiiqda ay tahay in quraacdu ay goor hore tahay, Isbaanishku sida caadiga ah wax bay cunaan oo cunaan inta u dhexeysa laba ilaa saddex saacadood ka dib marka loo eego Yurub. Ma iloobi doono qado, oo dhacda duhurkii ka hor cuntada weyn, iyo shaah galabtii, oo ah cunto fudud oo la qaato ka hor cashada.
Baararka iyo qasabada
Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee gastronomy-ka Isbaanishka waa tapas. Tabaaska waa qaddar yar oo cunto ah oo la siiyo si ay ula socdaan cabitaannada baararka. Isbaanishka aad ayey caan u tahay inaad asxaabta u raacdo tubas, taas oo ka kooban baar ilaa baar si aad wax u cunto oo u cabto, badanaa galaas biir ah ama khamri.
Fikradda Taabasadu waa wax ajaanibta aad uga fajiciya maxaa yeelay iyagu uma baran inay wax cunaan oo wax cabaan iyagoo istaagaya baarar dadku ku badan yihiin iyo inay maraan baararka ugu caansan. Si kastaba ha noqotee, sida ugu dhakhsaha badan ee ay isku dayaan, iyagu ma doonayaan wax kale.
Isbaanishka waxaa caado u ah in lagu salaamo asxaabta iyo shisheeyaha laba dhunkasho dhabanka, wax aan ka dhicin wadamada kale ee yurub marka horena waxay umuuqataa waxoogaa layaab laakiin xiriirka jirka waa ku badanyahay wadankaan.
The siesta, waqtiga yar ee aan seexanno kadib cunida taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan dib u cusbooneysiino batariyadayada si aan u wajahno maalinta inteeda kale, waa caado Isbaanish ah oo si tartiib tartiib ah caan ugu ah dadka ajaanibta ah. Nasashada ayaa cilmi ahaan loo caddeeyay inay wanaajineyso caafimaadka iyo wareegga dhiigga iyo ka hortagga buuqa.
Wax aad uga yaabiya ajaanibta markay yimaadaan Isbaanishka waa caado ah inay indhoolayaal ku helaan guryaha oo dhan. Wadamada waqooyiga Yurub, iyaga oo waqti yar ku leh qorraxda, waxay isku dayaan inay ka faa'iideystaan ​​dhamaan iftiinka suurta galka ah oo ay adeegsadaan kaliya daahyada si ay ugu daboolaan markay dhibayaan. Si kastaba ha noqotee, Isbaanishka iftiinku wuu xoogan yahay, sidaa darteed haysashada daahyada oo keliya kuma filna, gaar ahaan xagaaga. Intaas waxaa sii dheer, indhooleyaasha waxay siiyaan asturnaan dheeraad ah guriga.
Sawir | Aad u xiiso badan
Isbaanishka Sannadaha Cusub Eve
Sidee Sanadka Cusub looga qaataa Spain? SWaan hubaa inaad waligaa maqashay laba iyo toban canab oo nasiib leh. Sida caadadu tahay, waa inaad midba mar u cuntaa garaacista waqtiyada saqda dhexe ee bisha Diseembar 31deeda. Qof kasta oo ku guuleysta inuu dhammaantood ku qaado waqtigii loogu talagalay oo aan ku mergado wuxuu heli doonaa sannad nasiib iyo barwaaqo buuxda.
Waxaan cunnaa waqti dambe marka loo eego dadka kale ee reer Yurub oo markii aan halkan imid dalxiisayaal badan ayaa ku adkaatay inay la qabsadaan. Waxaan sidoo kale leenahay caado waana taas Cunto wanaagsan ka dib, Isbaanishku waxay wakhti fiican ku qaataan inay fadhiistaan ​​miiska iyagoo wada sheekaysanaya iyagoo ku raaxaysanaya kafee iyo macmacaan. Waxyaabaha aan annagu leenahay oo ka yaabiya kuwa nagu soo booqda markii ugu horreysay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » dhaqanka » Caadooyinka Isbaanishka
10ka magaalo ee Isbaanishka ee soo jiidashada leh ee qabsaday Instagram
Cáceres, maxaa lagu arkaa magaalo kuu horseedi doonta jacayl